Su'aal: Xanuun ayaa iga haayo lugta midigta?
Author Topic: Su'aal: Xanuun ayaa iga haayo lugta midigta? (Read 6044 times)
« on: October 10, 2011, 05:45:23 PM »
asc wr wb walaalayaal allah ajar idinka siiyo sida aad ugu jawaabtaan walaalihiina somaliyeed walaal waxaan qabaa su,aal sidan maxaa sababa xanuun ayaa iga haaya lugta midigta ah waxoow igu bilaaday marki ugu horesay anigoo ur leh 2004 ilaa hada waa ihayaa xanuunkaas waa leyga saaray raajo sinta waxba kama qabtid baa layiri waxoow iigu daran yahay waqtiga caaadada soo socoto oo ilaa madax ilaa cagta dhexdeeda oow iga qabaa uma jiifa karo midigta waxaan tegay dhaqtarka naagaha waxba maqatid baa layiri lkn waxaa iga xiran tuubka midigta ey dheheen baartinaan kasta waa maray in kastoo wax iga sheega aan arkin wax ey tahay aan waayay majiraa xidid usu qabta ultaraha iyo cagta dhexdeeda hadiise oow jira maxa lagu yiraahdaa caafimaadka waa mahadsan thiib wsc wr wb
Re: Su'aal: Xanuun ayaa iga haayo lugta midigta?
« Reply #1 on: October 15, 2011, 05:58:33 PM »
Markii hooyada uurka leh u gudubto bilaha dambe ee uurka waxaa uurjiifka culeyskiisa uu saaraa neerfaha loo yaqaanno "Sciatic Nerve" oo u qaabilsan dareen siinta lugta laga billaabo sinta.
Haddii dhaawac uu gaaro neerfahaas wuxuu keenaa xanuun loogu magac daray neerfaha oo loo yaqaanno "Sciatica".
Sciatica waa xanuun wata kabuubyo oo ka billawdo barida gudaheeda kaasoo u gudbo qaybta dambe ee bowdada iyo lugaha. xanuunkaan marmarka qaar wuu daranyahay oo qofka kama shaqaysan karo.
Laakiin markii cunugga uu badasho booskiisa, hooyadu way nafistaa, xanuunkane wuu qarsoomaa.
Xanuunka labaad ee sinta ku dhici karo xilliga uurka waa mid ku faafsan sinta illaa lugta tanoo ka timid culeyska uurjiifka oo kala sikiyay lafaha yaryar ee miskaha, cadaadiskaan oo ka yimid culeyska minka. xanuunkaan hooyadu markuu hayo waxay aad u dhibsataa in ay dhinac dhinac u seexato, qaabkaan ay ka helaan haweenka uurka leh.
Xanuunka kale wuxuu ka imaan karaan dabcis ku timid xeiyada iyo seedaha miskaha ee isku hayo lafaha meesha ku jira sababtoo ah xilliga uurka waxaa la soo daayaa hormoonno dabciya seedahaas si foosha uu eebbe ugu fududeyn lahaa uurjiifka, lafahane ku kala sikan lahaayeen, marka haddii cunuggu uu aad u culus yahay ama uu weynyahay waxay keenaysaa in lafahii ay aad u kala durqaadaan, seedihiina ay dabcaan, halkaas ayuuna xanuunka ka yimaadaa.
Xanuunkaan waxaa lagu garan karaa barar sinta ka soo muuqda, lugta oo aan kor loo qaadi karin, labada lugood oo aan la kala sikin karin, hal lug oo aan lagu istaagnaan karin.
xanuunkaan waxaa mar mar la socdo in celiska kaadida ay dhibaato noqoto.
Sadaxda xanuun ee kor ku xusan waa la dareemaa xilliga caadada.
Marka xanuunnadaan maahan kuwo lagu fahmi karo baaritaan raajo iyo wax la mid ah, laakiin hadduu takhtarka aqoon u leeyahay xanuunnadaan wuxuu ku ogaan karaa kaliya waraysi iyo wiisito.
Fadlan la xiriir takhtar aqoon u leh xanuunnadaan si loo garto xanuunka ku hayo noociisa.
Haddii aad dooneyso in aad adiga baarato xanuunnadaan oo isku fiiriso calaamadaha aad dareemeyso iyo kuwa laga sheegay, baaro cudurradaan hoose ku qoran.
1- Sciatica (pregnancy) or (menstruation)
2- Pelvic Gridle Pain.
Haddii aad u baahatahaya faahfaahin dheeraad ah waa na weydiin kartaa.
Views: 37797 March 09, 2011, 10:28:48 PM
Views: 37633 January 20, 2018, 03:01:49 PM
Views: 58957 April 29, 2016, 09:52:03 PM